Dagaalka Fahad vs Rooble: Tallaabooyinkii uu qaaday Rooble iyo arrintii ka dhex dhacday guddiga doorashada - Caasimada Online
Home Warar Dagaalka Fahad vs Rooble: Tallaabooyinkii uu qaaday Rooble iyo arrintii ka dhex...
Dagaalka Fahad vs Rooble: Tallaabooyinkii uu qaaday Rooble iyo arrintii ka dhex dhacday guddiga doorashada
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa u dhaqaaqay inuu joojiyo kursiga tirsigiisu yahay HOP#86 ee uu u sharaxan yahay taliyihii hore ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, kaasi oo ay deegaan doorashadiisa tahay magaalada Beledweyne.
Dagaal siyaasadeedka Fahad iyo Rooble ma aheyn ku qarsoon. Xafiiska Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa isku dayey inuu isticmaalo guddiga oo mideysan si ay kiiskaan uga shaqeeyaan, laakiin laguma guuleysan.
Dhowr maalmood ka hor ayey howshaan billaabatay, laakiin labadii Maalmood ee lasoo dhaafay waxaa jiray abaabul xooggan oo kursigaan ku saabsan.
Sida ay noo xaqiijiyeen xubno kamid ah guddiga doorashada heer Federaal, kooxda Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa Talaadadii la fadhiisatay guddoomiyaha guddiga doorashada heer Federal Muuse Geelle, kaai soo ay doorashadiisa gacan weyn ku lahaayeen Ra’iisul Wasaare Rooble iyo hoggaamiyaha Puntland Saciid Deni.
Waxaa ninkaas la hor dhigay inuu joojiyo qabashada doorashada kursiga HOP#86 ee uu u sharaxan yahay Fahad Yaasiin, dood kadib waxaa la sheegay inuu Muuse dalbaday inuu arrintaas kusoo qanciyo xubnaha kale ee guddiga, maadaama uu buuq ka dhallan karo haddii uu go’aan iska qaato.
Inta badan xubnaha guddiga doorashada ayaa Arbacadii ka shiray kiiskaan, laakiin Muuse iyo xubnihii ku aragtida ahaa waa laga diiday soo jeedintaas, waxayna xubnaha kale ku doodeen inay jiraan kuraas badan oo la boobay oo xafiiska Rooble oo uu diiday in la hor istaago.
Waxay sheegeen in maadaama aan kuwii horaba tallaabo laga qaadin inay adag tahay in kursigaan si gooni loo beegsado. Waxay kaloo xubnaha ku doodeen in kiiskaan yahay mid siyaasadeysan oo ay wacan tahay in guddiga uu ka dhex baxo arrimahaan oo aysan noqon dad la isticmaalo.
Markii uu guddoomiyaha guddiga arrintaan ku qancin waayey xubnaha kale ee guddiga waxaa soo baxday in xubnaha diidmada qaba ay la fadhiistaan Ra’iisul Wasaare Rooble.
Khamiistii waxaa la xaqiijiyey inuu Rooble la kulmay xubno uu hoggaaminayey guddoomiye ku xigeenka guddiga doorashada ninka lagu magacaabo Mowliid, waxaana mar kale la dul istaagay joojinta kursiga HOP#86.
Mid ka mid ah xubnihii guddiga ee Rooble la kulmay waxaa laga soo xigtay inay Rooble waydiiyeen sababta kuraastii kale ee la boobay aan qoraal looga soo saarin, balse uu midkaan u xiiseenayo in la joojiyo.
Waxay xubnahaan sheegeen inuu Rooble ugu jawaabay intaan aniga halkaan joogo ma dhici karto inuu Fahad ku biiro baarlamanka.
Xubnihii uu hoggaaminayey guddoomiye ku xigeenka diidmadoodii ayey ku adkeysteen, balse hal talo ayey xafiisks Rooble uga tageen sida la sheegay, taasoo aheyd inuu Ra’iisul Wasaaraha shir jaraa’id qabto uuna isaga iclaamiyo inuu guddiyada farayo inay kursigaasi joojiyaan, markaas kadibna ay guddiyada qaadan doonaan go’aanka Ra’iisul Wasaaraha iyadoo dadweynaha wada ogyihiin.
Arrintaas dhanka Ra’iisul Wasaaraha waa ku adkaatay. Intaas kadib xubno ay ka mid yihiin Muuse Geelle oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal, Liibaan Shuluq oo ay Ra’iisul Wasaaraha ehel yihiin oo isna guddiga ka tirsan, nin la yiraahdo Xiis oo dhanka Jubbaland ka socda iyo Afahayeenka guddigaan ayaa la sheegay inay dhinac noqdeen oo ay go’aanadeen inay soo saaraan warqad lagu joojinayo kursiga HOP#86, halka xubnihii kale ee guddiga qaadaceen taasoo kala jabisay guddiga doorashada ee heer Federaal.
Guddoomiye ku-xigeenkii iyo aqbalabiyadii guddiga hal dhinac ayey mareen halka guddoomiyihii iyo 3 xubnood oo kale ay isku dhinac noqdeen.
Bogga Facebook ee guddiga doorashada ee Heer Federaal ayaa lasoo geliyey warqadda lagu joojinayo kursiga u uu sharaxan Fahad, laakiin wax yar kadib xubnaha kale ee diidan ayaa ka saaray warqaddii Facebook, halka ay soo galiyeen warqad kale oo lagu beeninayo middii hore.
Labada dhinac ee guddiga qole waxay heysataa bogga Facebook ee guddigaan qolada kalana waxay heystaan bogga Twitter-ka.
Warbaahinta Dowladda Federaalka ah ayaa iyadana xiisadaan ku dhex milmatay, iyadoo la safatay garabka taageersan Ra’iisul Wasaare Rooble.
In xubnihii guddiga doorashada kala jabeen waxay walaac weyn ku tahay geediga doorashada Soomaaliya. 7 Maalmood ayaa ka dhiman waqtigii la qorsheeyey in lagu soo afjaro doorashada Golaha Shacabka.
Guddiga doorashada ee maamulka HirShabelle ayaa iyaguna qaadacay warqadda kasoo baxday garab kamid ah guddiga doorashada ee heer Federaal, iyagoo ku adkeystay in Axadda la qabanayo doorashada kursiga uu Fahad Yaasiin u sharaxan yahay.